Izicwangciso zeArhente yoKhenketho yaseZambia yeFITUR Madrid
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Izicwangciso zeArhente yoKhenketho yaseZambia yeFITUR Madrid
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • Cinezela iZaziso • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Disemba 21, 2017
IZambia kulindeleke ukuba ibonakalise ukhenketho lwayo kunye namandla alo kurhwebo kwi-Spanish International Tourism and Trade Fair (i-Feria Internacional de Tourismo FITUR) eMadrid, eSpain.
UMishini waseZambia eFrance osebenzisana neArhente yoKhenketho yaseZambia bazakube bebonisa kulo mboniso wamazwe ngamazwe ukusukela ngomhla we-17 ukuya kowama-21 kweyoMqungu, 2018 njengenxalenye yeenzame zokubonisa iimveliso neenkonzo zokhenketho zeli lizwe ngokunjalo nokungena kwiMarike yaseSpain.
Kwaye uMmeli weZambia eFrance u-Ohloniphekileyo uMnu. Humphrey Chibanda uthe iZambia izakuqinisekisa ukuba ibeka indawo yokhuphiswano njengoko ilizwe lifuna ukutsala abakhenkethi abatsha bamazwe aphesheya kwiimarike ezintsha ezinjengeSpain, Mexico Mexico Argentina kunye neBrazil, ngenxa yamathemba amakhulu anikezelwa Abakhenkethi abathetha iSpanish kwihlabathi liphela.
“Abakhenkethi baseSpain abaya eZambia bahlala bembalwa kwaye ngenxa yoko kufuneka sityale imali eninzi kwezentengiso nasekukhuthazeni iZambia njengendawo yabakhenkethi abathetha iSpanish. Imakethi yabakhenkethi abaphumayo eSpain ngowona mthombo ubalaseleyo weSafari kunye nabafuna ukuzonwabisa, ”utshilo u-Ambassador Chibanda.
Umthunywa waseZambia oya eFrance okwanguMmeli osisigxina kwi-UNWTO ukusukela oko wacela amashishini ezokhenketho aseZambia ukuba athathe eli thuba kwaye aqhakamshele ngokukhawuleza iArhente yoKhenketho yaseZambia ngendlela abanokuthi bathathe inxaxheba ngayo kulo msitho.
U-Ambassador u-Chibanda uphinde waveza ukuba kwakuloo mboniso mnye, iMishini yaseZambia esebenza ngokubambisana neMadrid Chambers yezoRhwebo noShishino iza kubamba iqonga lotyalo-mali laseZambia-Spain nge-16 kaJanuwari, 2018 eMadrid, eSpain.
Uthe le foramu iza kugxila kwezolimo, ukuveliswa kwemveliso, amandla kunye nophuhliso lweziseko ezingaphezulu kweenkampani ezingama-50 zaseSpain ekulindeleke ukuba zizimase.
I-Mission ke ngoko, inqwenela ukucebisa icandelo labucala laseZambia abanqwenela ukuya kule foram ukuba babhalise ngokusesikweni kwi-Arhente yoPhuhliso yaseZambia njengoko iZambia ijolise ekudaleni ubambiswano phakathi koosomashishini baseSpain nabaseZambia.
Urhulumente waseZambia naye kulindeleke ukuba atyikitye iMemorandam yokuSebenza (MoU) phakathi kweMadrid Chambers of Commerce kunye neZambia Association of Chambers of Commerce and Industry (ZACCI).
Umsebenzi osebenza neBarcelona yezoRhwebo kunye nezoShishino iya kuqhubeka nokubamba iqonga layo lokuqala laseZambia- iBarcelona yoTyalo-mali ngoFebruwari 20, 2018 eBarcelona, ​​eSpain.
I-FITUR yindawo yokuhlangana yonyaka yamashishini ezokhenketho kunye neengcali kwaye iyindawo ekhokelayo kukhenketho lwamazwe aphesheya kunye nentengiso yorhwebo yeemarike zase-Ibero zaseMelika ezingenayo neziphumayo.
Umboniso utsala umdla wababonisi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye ubonakalisile ukuba yindawo yentengiso efanelekileyo kubakhenkethi abathetha iSpanish njengoko phantse onke amazwe athetha iSpanish ethatha inxaxheba kulo Mboniso.